Ceelwaaq: Ceel laga qoday tuulo oomane aheyd - Radio Ergo
Ceelwaaq: Ceel laga qoday tuulo oomane aheyd
in Arrimaha Bulshada
Ceelkii ugu horreeyay ee riig leh ayaa laga qoday tuulada Wargaduudo oo qiyaastii 120km dhanka bari kaga beegan degmada Ceelwaaq wee gobolka Gedo. Ceelka laga hirgeliyay tuuladan oo daaqsin wanaagsan leh waxaa ku baxday lacag dhan boqol iyo kontan kun oo doolar oo ay qeyb ka mid ah ku yabooheen soomaalida qurbo-joogta ah.
Tuulada oo ay horey dad haraad ugu geeriyoodeen ayaa waxaa ku nool dad dhan kun iyo shan boqol oo qoys oo xoolo-dhaqato iyo beeraley ah. Xaliimo Aadan oo ka mid ah dumarka tuulada ayaa sheegtay in ceelkan wax weyn ka badalashay noloshooda, una soo dhaweeyay biyaha oo ay horey ugu doonan jireen ceel maalin dhan loo socdo.
Dadka tuulada Wargaduudo degan ayaa deegaanka ka barakici jiray xilliyada jiilaalka sida uu sheegay Cumar Sheekh Ibraahim oo ka mid ah odeyaasha deegaanka. Dadku waxa ay xoolaha ula barakicijireen dhulka webiga Jubba ee gobolka Gedo ku dhow. “Dhulku hadda oonkii waa ka baxay oo ma dhici doonto in aynu haraad ka barakacno markale,” ayuu yiri Cumar oo la hadlay weriye Raadiyoow Ergo ka tirsan.
BOOSAASO: CUDURRO BAABI’IYAY DALAGYADA BEERAHA LAAG
Qoysas ka qaxaya Baardheere
Ka ganacsiga malabka shinnida oo nolol u abuuray dadka Ceelbarde
Doolow: Dhaqaale yarida ka dhalatay COVID19-ka oo saamaysay nolasha qoysaska barakaca ah
Somaliland: Haweenka ganacsiyada yaryar leh oo u baahan daymo si ay u helaan kabitaan dhaqaale
Dhallinyaro is-xilqaamay oo howlgal nadaafad ah ka fuliyay xaafadda Buundo-weyn, Beledweyne